Augment na Virtual Adị Ga-A Ga-Commerce | Martech Zone
Mgbe ndị mmadụ jụrụ m maka amụma, m na-agwakarị ha onye ọzọ. Adịghị m ọtụtụ onye futurist, mana enwere m ezigbo ndekọ egwu na ịhụ etu teknụzụ teknụzụ ga-esi emetụta omume ịzụ ahịa. Otu teknụzụ m jiri nwayọ jụụ abụgo eziokwu na mebere eziokwu. Ọ bụ ihe niile jụụ, ma m kwere na anyị ka bụ afọ ole na ole site na iji ya eme ihe.
Ọ bụrụ na ị bụ ụlọ ahịa na-ere ahịa, ezie, aga m enwe obi ike na ịkọwa mmetụta ahụ. Mmetụta nke ecommerce na mcommerce na-enwe mmetụta dị egwu karị na mkpọsa ahịa karịa na mbụ. Retail sales-anọgide na-plummet to na ọ nwere ike ọ bụghị nanị na-eresị dị ka aku na uba nsogbu.
Ndị ahịa amụtawo tụkwasị obi n'ịzụ ahịa n'ịntanetị. Na otu ụbọchị mbupu n'ọtụtụ obodo, ọ bụchaghị ọtụtụ ihe kpatara ị ga-eji kwụ n'ahịrị na ụlọ ahịa dị na mpaghara ọzọ. Site na ngwa ahia rue ugboala, ntaneti rue nbata nke uzo bu isi. Naanị ihe kpatara na ndị ahịa anaghị anabata ahịa n'ịntanetị bụ na a ka nwere ihe mmetụ na ahụmịhe.
Ma eziokwu dịwanye elu na eziokwu nke mebere ga-agbanwe nke ahụ.
Ọ bụ ezie na ndị ọkachamara n’ichepụta ụlọ ọrụ na-ebu amụma ịgba egwu egwuregwu na njem niche iji rite uru kasịnụ, ha kwenyere na teknụzụ VR / AR ga-agbanwekwa ụzọ anyị si azụ ahịa. Dị nnọọ ka ngwaọrụ mkpanaka gbanwere eCommerce (mCommerce nwere ihe karịrị 34% nke azụmahịa eCommerce niile n'ụwa), VR na AR teknụzụ ga-agbanwe ụwa eCommerce anyị maara na ọdịnihu dị nso.
Ihe omuma a sitere na Maven E-commerce na-eweta eziokwu nke teknụzụ a na ndụ. Ndị a bụ ihe atụ di na nwunye ebe eziokwu na-abawanye ma bụrụ eziokwu na-enye a ahụmịhe ka mma karịa ala ụlọ ahịa.
Zụta arịa ụlọ ọhụrụ? Ọ dịghị ihe ọzọ na nha… naanị iji augmented eziokwu ebe ahụ ngwaahịa na ozugbo n'ime ụlọ gị.
Zụta ụgbọ ala? Gini mere ị ga-abanye n'ime ụlọ nke ezigbo ụlọ na onye na-ere ahịa wee nwalee ụgbọ ala gị na-esote ya na ihe ị na-achọ, ụdị, agba na mgbakwunye ị na-achọ Ma nweta njem nlegharị anya nke njirimara niile.
Clotheszụta uwe? Hụ otu ị si ele ha anya n'ụlọ, ọbụnadị hụ na ọ dị ezigbo mkpa.
Ngwongwo mebere, katalọgụ nke na-agagharị agagharị, egwuregwu, njem njegharị nke ụgbọ ala, ime ụlọ eji ejiji… ihe ọ bụla ga-ekwe omume iji wulite ahụmịhe ụlọ ahịa site na nkasi obi nke ọfịs gị ma ọ bụ ihe ndina ebe obibi. Ndị na-ere ahịa na-agaghị anabata ụmụ ga-ahapụ ngwa ngwa. Ndị ahịa na-amatakwa ya. N'afọ gara aga, ndị kwuru eziokwu ga-agbanwe ụzọ ha si azụ ahịa esiwanye na 37% gaa 63%.
Tags: arkwadokwara ọkpụkpọ òkù eziokwuecommercegamificationmaven ecommercemobile immersive katalọgụOleg Yemchukime ụlọ ejiji mebereNgwongwo meberevirtual eziokwunjegharị ụgbọala meberevr